Lazio Oo Ku Ciyaari Doonta Garoon Qayb Madhan Tahay
HomeWararka MaantaLazio Oo Ku Ciyaari Doonta Garoon Qayb Madhan Tahay
Kooxda kubadda cagta Lazio ayaa labada kulan ee soo socda ku ciyaari doonta garoonkeeda oo qayb ka mid ah uu haawanayo, kaddib markii lagu helay in Axaddii ay taageereyaasheedu ay aflagaadooyin cunsuriyeysan kula kaceen ciyaartoy madow oo ka tirsan kooxda Sassuolo.
Taageereyaasha Lazio ayaa cay u miisay ciyaaryahannada midabkoodu madowga yahay ee Claud Adjopong iyo Alfred Duncan, kuwaas oo taageereyaal tiradoodu ka badan tahay 5000 qof ay aflagaadooyin cunsuri ah kula kaceen.
Xidhiidhka kubadda cagta waddanka Talyaaniga ayaa sheegay in ay ganaax kusoo rogeen qayb ka mid ah garoonka Curva Nord, kaas oo labada ciyaarood ee soo socda aan loo ogolaan doonin inay taageereyaal fadhiistaan.
Ciyaartooyada cunsurinimada lagula kacay ma aha Adjopong iyo Duncan oo kaliya, hase yeeshee waxa iyagana la caayey laacibiin ka tirsan kooxaha Cagliary iyo Udinese.
Garoonka Stadio Olimpico ayaa 5 November sida ka Lazio oo kale laga xayiray inay taageereyaashu fadhiistaan, kaddib markii ay ka dhaceen falal cunsurinimo oo ay ku kaceen jamaahiirta Roma.
All Goals & Highlights – Villareal 0-2 Barcelona